Somaliland Oo Ka Hadashay Arrimaha Ku Aaddan Wadahadallada DFS – Goobjoog News
Somaliland ayaa war kasoo saartay arrimaha wadahadalka ee ku aaddan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale safarkii madaxweyne Muuse Biixi ku tagay magaalada Addis Ababa.
War-saxaafadeedka ayaa sidan u qornaa:
Somaliland waxa ay soo dhawaynaysaa, lana qabtaa Ra’iisal Wasaaraha Dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed in Geeska Afrika noqdo meel nabad ah.
Dalalka Geeska Afrikana iyadoo mid walba la qadarinayo jiritaankooda dhuleed iyo madax-bannaanidooda qarannimo, in ay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo horumarka mandaqadda.
Shirkii wafdiga uu hoggaaminayo Madaxweynaha Somaliland uu la yeeshay Ra’iisal Wasaaraha dalka Ethiopia waxa la isku af-gartay in arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya lagu xalliyo wada-hadal iyo fagaare caalami ah, lagana fogaado wax kasta oo keeni kara colaado cusub iyo xasarado hor-leh oo ka curta Gobolka Geeska Afrika, gaar ahaanna Somaliland iyo Soomaaliya oo ay hore u dhex-mareen colaado lagu hoobtay.
Somaliland waxay ku aas-aasantay go’aan shacbi, waxaanay tixgelinaysaa deris-wanaagga iyo nabad ku-wada-noolaanshaha waddamada deriska ee geeska Afrika iyo kuwa beesha caalamka. Balse wada-hadal iyo nabad waarta waxay ku imanayaan Soomaaliya oo ka waantowda been abuurka, cadaawadda, iyo colaadda ay u hayso shacbiga Somaliland iyo Horumarkooda.
Guddoomiye Cusub Oo Loo Magacaabay Degmada Luuq